ATN: တိတ္ထိတဦး၏မှတ်တမ်း (နိဒါန်း)
မှတ်တမ်းရဲ့ စာကိုယ် ကို စောင့်နေမယ်ဗျို့ 
စိတ်ဝင်စားတယ် ကိုအောင်သာငယ်။ ကိုအောင်သာငယ် ပြောတဲ့သူက ကျွန်မနဲ့သိပ်ကိုတူတယ်။ ကျွန်မလည်း ဘာသာရေးကို ကျွန်မတို့ ရွာကလူတွေ အယူသည်းလွန်းလို့ မယုံးဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် ဗုဒ္ဓဘာ သာလို့ ပြောရမှာတောင် ခပ်ရှက်ရှက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသေးတယ်။ ဒါဗေမယ့် တောထဲ ရောက်လာပြီး ရှေ့တန်းမဆင်းရခင် ကျွန်မတို့ တပ်ရင်းက စာကြည့်တိုက်မှာ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရေးတဲ့ ရှေးဘ၀နောက်ဘ၀နဲ့ ဓမ္မစရိယ ဦးဌေးလှိုင်ရေးတဲ့ ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးဆိုတဲ့ စာအုပ်နှစ်အုပ်က ကျွန်မကို ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင် တွန်းပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆက်ရန်ကို မျှော်နေပါတယ်။
ဒိဋ္ဌိ - သမ္မာဒိဋ္ဌိ... စသဖြင့် (မှန်ကန်သောအမြင်လားမသိဘူး.. မြန်မာလိုက)
တိတ္ထိ - တိတ္ထိ တက္ကတွန်း ....စသဖြင့်..(လူကိုသုံးတယ်) မှတ်ထားမိလို့.....။
သတ်ပုံကွဲပြီး အသံထွက်တူတဲ့ အဲဒီစကားလုံး ၂ လုံး မကွဲဘူးဖြစ်နေတယ်။
သေချာမသိပဲ ထင်တာကိုရေးထားတာမို့လို့ ညီမ အမှတ်မှားနေရင် ပြင်ပေးပါဦး....။
(ခုန ပြောဖို့မေ့သွားလို့ ပြန်လာပြောတာ.. :P)
စာလုံးပေါင်းလေး လာပြောပေးမလို့ ဆင်ဆင် ပြောသွားတာနဲ့ တိုးနေတယ်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ တိတ္ထိ မှ အယူမှားသူတွေကို ခေါ်တာပါ။ မုချဒိဌ လား.... မုချဒိဌိလား ဆင်ဆင်...။
ဒိဋ္ဌိဆိုတာ ပါဠိလို ယုံကြည်မှုလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ယုံကြည်မှု လွဲမှားနေတဲ့သူတွေကို မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာတော့ အများစုက အဲသည် အဓိပ္ပါယ်တွေကို မသိတော့ပါဘူး။ စာလုံးပေါင်းတွေကိုတောင်မှ တော်ရုံလူတွေ သိတော့တာမှ မဟုတ်တာ။ အဓိပ္ပါယ်ဆိုတာ ဝေလာဝေးပေါ့။ သည်တော့ တိတ္ထိနဲ့ ဒိဋ္ဌိ မတူမှန်း ဆင်ဆင်နဲ့ ကိုဘွိုင်းဇ်ကို ပြောလိုက်ပါရဲ့...
ကျနော်လည်း ဆင်ဒန်လား၊ ကိုဘွိုင်းဇ်တို့နဲ့ ထပ်တူနီးပါး အမြင်တူပါတယ်။ ဒိဋ္ဌိဆိုတာ “အမြင်၊ အယူ” ပါ။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးမှာ သမာဒိဋ္ဌိ… ကောင်းသောအမြင်၊ မှန်သောအမြင် ရှိရမယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ လွဲမှားတဲ့အမြင်ကိုတော့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့။
အယူမှားတဲ့လူတွေကို “ဒိတ်ထိ” ဆိုတဲ့အသံထွက်နဲ့ ခေါ်ဆိုနေကြတဲ့ စကားလုံးဟာ စာလုံးပေါင်းအားဖြင့် ဆင်ဒန်လားပြောသလို “တိတ္ထိ” ဖြစ်ဖို့သာ များပါတယ်။ “တိတ္ထိ” ဟု ရေးသားမှသာ မှန်ကန်မည်ဟု ထင်မိပါသည်။ (ကျနော့်အထင်မျှသာ ဖြစ်ပါသည်။)
အယူလွဲမှားသော လူပုဂ္ဂိုလ်ကို “ဒိဋ္ဌိ”ဟု ရေးသားခြင်းသည် မှန်ကန်ပါသလား။ သိလိုပါသည်။
နဲနဲလောက် အာချောင်ပါရစေ..း)
မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓါန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓါန်ရဲ့ အလိုတော်အတိုင်း..စာအုပ်ထဲမှာသိဖူးတာလေး..
တိထ္တိ = heretic = အများလက်ခံထားသည်နှင့်မတူ ကွဲပြာေးသော အယူအဆရှိသူ၊ အစဉ်အလာကိုမယုံကြည်သော အယူအဆရှိသူ
ဒိဌိ = 1.belief.2. Same as မိစ္ဆာဒိဌိ.. တဲ့.
မိစ္ဆာဒိဌိ = false belief; heresy တဲ့
ဦးဟုတ်စိန်ရေးတဲ့ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်-ပါဠိ အဘိဓာန်ထဲမှာတော့ ဒီလိုတွေ့တယ်။
ဒိဋ္ဌိ =aview, philosphic standpoint, speculative theory,
မိစ္ဆာအယူ = false view, မိစ္ဆာ ဒိဋ္ဌိ
တိတ္ထိ = an adherent of another sect,asectarian, heretic
အယူလွဲမှားသူဆိုရင် တိတ္ထိဆိုမှ မှန်မယ်။ (ထင်တာပဲ)
ကိုပေါ - ကိုပေါပြောတာ မှန်ပါတယ်။ လူကို ပြောရင် တိတ္ထိပဲ ဖြစ်ရမှာပါ။ သည်အတွက် ဆင်ဒန်ဒလားနဲ့ ကိုဘွိုင်းဇ်ကိုလည်း တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ အဲသည်အတွက် အခု ခေါင်းစဉ်ကိုလည်း ပြန်ပြောင်းထားပါတယ်။
ဟမ်... အလကားနေရင်း ဘာပြုလို့
နာမည်ကို အသံထွက်ပြီးဆိုကြည့်ပါဦး.... eeeeee
အာ.. စာလုံးပေါင်း မှားသွားတာပါ ငါ့ညီမရယ် ... အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်...
မှတ်တမ်းလေးက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်။...comment တွေရော...
လာဖတ်သွားပါတယ် အကိုရေ ...
စတော့ပြီးပြီ.. စိတ်ဝင်စားစရာ ... မြန်မြန်ဆက်ပါဗျို့...
စာအုပ်ထဲမှာ ပါလို့ မဟုတ်ပဲ အဲဒီ့အဖိုးကြီးပြောသလို ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ တကယ်သိတဲ့အချိန် အထိ စောင့်ကြတာပေါ့ အစ်ကိုရာ။ သက်သေပြလို့လည့်း မရသေး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ မသိသေးရင် truth ဆိုရင်တောင် potential truth ပဲလို့ ကျွန်တော်တော့ ထင်တာပဲ။ လူအများစု ဒေါသတကြီး အငြင်းပွါးနေကြတာလည်း သက်သေလည်းပြလို့ မရသေး၊ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ လည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မသိကြသေးတဲ့ အရာတွေကို မျက်စေ့မှိတ် ငြင်းနေကြတာ များတာပဲ။
ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ပါစေအစ်ကိုး)
အိုး... အို.... ဒီကစောင့်နေသူ...
(ချိုသင်းကို ဆက်လက် ကူညီသီဆိုသည်...)